Gigi Hadid ရဲ့ တစ်နေ့တာ စားသောက်တဲ့ပုံစံနဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း -
Posted on September 3, 2018 February 15, 2019 Author Hnin Ei Oo	Comment(0)
GiGi Hadid လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ သိပ်လှတဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ကောက်ကြောင်း၊ ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိပြီး သိပ်လှတဲ့မျက်နှာ၊ ကမ္ဘာကျော်အဆိုတော် Zayn ရဲ့ချစ်သူလို့ ခေါင်းထဲမှာ အချက်အလက်တွေက တန်းစီပြီးထွက်လာမှာပဲနော်… ဒီလို အစစအရာရာ ပြည့်စုံနေတဲ့ အလှနတ်မိမယ်တစ်ယောက် ဖြစ်လာဖို့အတွက် နောက်ကွယ်မှာ အားထုတ်မှုတွေအများကြီး လိုက်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့ အထူးတလည် ပြောနေစရာမလိုတော့ပါဘူးနော်။ GiGi လို လှချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ယောင်းယောင်းတွေကို GiGi ရဲ့ တစ်နေ့တာ အစားအသောက်နဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းပုံစံကို ဒီဆောင်းပါးလေးထဲမှာ ဖော်ပြပေးသွားမှာပါ။ ကဲ ဆက်ကြည့်ရအောင်နော်…
GiGi ရဲ့နောက်လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုကတော့ အစားအသောက်ကို သင့်တင့်မျှတပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွှတ်အောင် သေချာတွက်ချက်ပြီး စားသောက်တာပါပဲ။ သူ(မ)ဟာ လေ့ကျင့်ခန်းထက်စာရင် အစားအသောက်ကို ပိုပြီး သတိထားစားသောက်ဖို့ ပြောတတ်သူပါ။ မနက်စာကိုတော့ ကြိတ်ခြေထားတဲ့ ကြက်ဥပြုတ်၊ ဝက်ပေါင်ခြောက်နဲ့ ပေါင်မုန့်မီးကင်၊ လိမ္မော်ဖျော်ရည်နဲ့ ကော်ဖီကို အများကြီးစားသူပါ။
ကဲ ဝိတ်ကျဖို့အတွက် တစ်နေ့လုံး ရေပဲသောက်ပြီး တခြားဘာမှမစားဘူးဆိုတဲ့ မမတွေ ဘယ့်နှယ်ရှိစ? ဝိတ်ချတယ်ဆိုတာ လုံးဝ မစားမသောက် နေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ စိတ်အလိုလိုက်ပြီး မစားဖို့၊ ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ထိန်းသိမ်းပြီး နောက်ကလေ့ကျင့်ခန်းလေးလည်း ကူဖို့ပြောတာပါ။
အချိုတွေ၊ ဟော့ပေါ့နဲ့ မာလာရှမ်းကောတွေကို ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကျ စားချင်သလောက်စားနေသရွေ့တော့ အသားတိုးလာတာကလွဲလို့ ကျန်တာ ဘာမှဆက်ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူးနော်။ ကိုယ်ကမော်ဒယ်မှမဟုတ်တာ ဝလည်းလှတယ်ဆိုပေမဲ့ ကိုယ့်ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်လာတဲ့အထိဆိုရင်တော့ သတိထားဆင်ခြင်ပါလို့ သတိပေးလိုက်ပါရစေနော်။
References : Fashion Lady, Popsugar
GiGi Hadid လို့ပွောလိုကျတာနဲ့ သိပျလှတဲ့ ခန်ဓာကိုယျ ကောကျကွောငျး၊ ဆှဲဆောငျမှုအပွညျ့ရှိပွီး သိပျလှတဲ့မကျြနှာ၊ ကမ်ဘာကြျောအဆိုတျော Zayn ရဲ့ခဈြသူလို့ ခေါငျးထဲမှာ အခကျြအလကျတှကေ တနျးစီပွီးထှကျလာမှာပဲနျော… ဒီလို အစစအရာရာ ပွညျ့စုံနတေဲ့ အလှနတျမိမယျတဈယောကျ ဖွဈလာဖို့အတှကျ နောကျကှယျမှာ အားထုတျမှုတှအေမြားကွီး လိုကျနတေယျဆိုတာကိုတော့ အထူးတလညျ ပွောနစေရာမလိုတော့ပါဘူးနျော။ GiGi လို လှခငျြပါတယျဆိုတဲ့ ယောငျးယောငျးတှကေို GiGi ရဲ့ တဈနတေ့ာ အစားအသောကျနဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျးပုံစံကို ဒီဆောငျးပါးလေးထဲမှာ ဖျောပွပေးသှားမှာပါ။ ကဲ ဆကျကွညျ့ရအောငျနျော…
ကဲ ဝိတျကဖြို့အတှကျ တဈနလေုံ့း ရပေဲသောကျပွီး တခွားဘာမှမစားဘူးဆိုတဲ့ မမတှေ ဘယျ့နှယျရှိစ? ဝိတျခတြယျဆိုတာ လုံးဝ မစားမသောကျ နတောမြိုးမဟုတျဘဲ စိတျအလိုလိုကျပွီး မစားဖို့၊ ကိုယျ့စိတျကိုယျထိနျးသိမျးပွီး နောကျကလကေ့ငျြ့ခနျးလေးလညျး ကူဖို့ပွောတာပါ။
အခြိုတှေ၊ ဟော့ပေါ့နဲ့ မာလာရှမျးကောတှကေို ကိုယျ့စိတျတိုငျးကြ စားခငျြသလောကျစားနသေရှတေ့ော့ အသားတိုးလာတာကလှဲလို့ ကနျြတာ ဘာမှဆကျဖွဈလာမှာ မဟုတျပါဘူးနျော။ ကိုယျကမျောဒယျမှမဟုတျတာ ဝလညျးလှတယျဆိုပမေဲ့ ကိုယျ့ကနျြးမာရေးကို ထိခိုကျလာတဲ့အထိဆိုရငျတော့ သတိထားဆငျခွငျပါလို့ သတိပေးလိုကျပါရစနေျော။ Hnin Ei Oo (For Her Myanmar)
Posted on December 24, 2018 December 24, 2018 Author Hnin Ei Oo
နှင်းကတော့ ဆိုင်သွားတိုင်း ညှပ်ရင်း ညှပ်ရင်းနဲ့ ပြန်ကိုမရှည်တော့ဘူးရယ် 😛
ပျိုမေတို့အလှပြည့်စုံစေဖို့ ခြေချောင်းလေးတွေကို ဘယ်လိုမျိုး လှလှပပ ထိန်းသိမ်းရမလဲဆိုတာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ မိတ်ကပ်တွေ ဘယ်လောက်ပဲ လှအောင်ပြင်ပြင် အဝတ်အစား ဘယ်လောက်ပဲ ကျော့မော့အောင်ဝတ်ဝတ် ခြေချောင်းလေးတွေက ညစ်ပတ်နေမယ် မလှမပဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် ပြီးပြည့်စုံတဲ့အလှဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူးနော်။ ဒါကြောင့် ပျိုမေတို့အလှပြည့်စုံစေဖို့ ခြေချောင်းလေးတွေကို ဘယ်လိုမျိုး လှလှပပ ထိန်းသိမ်းရမလဲဆိုတာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) ခြေထောက်စိမ်တာမျိုးကို ပုံမှန်လေး လုပ်ပေးပါ။ ပုံမှန်စိမ်ပေးခြင်းဟာ ဆဲလ်သေတွေကို ဖယ်ရှားပေးပြီး ခြေချောင်းလေးတွေကိုလည်း အစိုဓာတ်ရစေပါတယ်။ ဘယ်လို စိမ်ကြမလဲဆိုတော့ – ရိုးရိုးရေထဲမှာ စိမ်လဲ ရသလို ဆားကြမ်း၊ ပန်းခြောက်လေးတွေ၊ အုတ်ဂျုံမှုန့်နဲ့ ရနံ့အဆီတွေကို ထည့်ပြီးတော့လည်း ဆယ်မိနစ်ခန့်လောက် စိမ်လို့လည်းရပါတယ်။ ရေကိုတော့ ကြက်သီးနွေးရေလေး သုံးပေးတာအကောင်းဆုံးပါပဲ။ (မပူမအေးကိုဆိုလိုတာပါ) အလွယ်ဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးကတော့ ဂလစ်စရင်း (ခံတွင်းဆေးရည်) ကို ရေနွေးလေးနဲ့ရောပြီး […]
စနစ်ကျမှန်ကန်တဲ့ skin care အသုံးပြုပုံအဆင့်ဆင့်
Posted on December 27, 2017 May 6, 2019 Author Myat Moe
အက်ဒမင်တို့ကို ခဏခဏ လာမေးကြတယ်..အသားအရေထိန်းသိမ်းဖို့ ဘာပြီးရင် ဘာလိမ်းရမလဲဆိုတာ…ခုတော့ ဒီမှာ ဖြေပေးလိုက်ပါပြီနော်…